Yintoni Isitshayina abafazi ikhangela kwi umyeni. Ividiyo Dating
Ilizwi lwabiwo-mali umyeni originates ukusuka ilizwi lwabiwo-mali izindlu, urhulumente subsidized karhulumente izindlu kuba low-ingeniso amakhaya. Njengoko igama kuthetha, uhlahlo-lwabiwo-mali husbands kwezoqoqosho amandla imizila elo idayimani husbands intelligent, educated, otyebileyo, kwaye kulungile-mannered abantu ukusuka respectable iintsapho. Nonetheless, uhlahlo lwabiwo-mali umyeni, ngokunxulumene Baidu, omnye engundoqo, iimpawu uhlahlo lwabiwo-mali umyeni kukuba abe eqhelekileyo. Hayi fernández kodwa hayi kakhulu handsome ndivuma amahlwempu okanye otyebileyo.
Uhlahlo-lwabiwo-mali husbands ingaba reliable, kunye financially kwaye yaxhobisa. Baya loyally hlala ekhaya kwaye zikhathalele le ndlu ayisayi kuphuma ukuba iinkwenkwezi okanye kuba extramarital imicimbi. Layo s ngenene nzima ukuba kuthi, ngenxa yokuba kukho abaninzi kangaka Isitshayina abafazi phandle phaya nge eyahlukileyo impendulo kwi-zabo engqondweni. Yabo imboniselo kwi yintoni i-namanani umyeni unje zahluke njengoko ngenxa bume baya nokukhula, imfundo baya kufumana, kwaye impembelelo yabo abazali njalo-njalo. Mna ll nje ukuza kutsho nge-bam elokugqibela kuqala: ayikho ke esezantsi impendulo. Ukuba ufuna ukufumana phandle yintoni a kubekho inkqubela ufunzele kuba, onalo ukwazi loluphi uhlobo umntu yena ngu kwindawo yokuqala. Emva yam college ubudala, omnye wam roommates ukuya kwezi ngomgca ezahlukeneyo guys yithi rhoqo ukuze ukufumana yakhe olona khetho. Interestingly, ekubeni otyebileyo kwakuyiminyaka phezulu wakhe uluhlu. Ngenye imini wandixelela ukuba wayengomnye dating u guys ngexesha elinye(dating ngaphezu omnye umntu ayiyo Isitshayina nto kuba ngokuqinisekileyo) secretly nangona(kodwa kuza t zibalisa noba kubo ukuba wayengomnye dating omnye umntu). Mna ngokuba wam mum ezinye ngemini, kwaye wathi kuye malunga oku, utshilo. Oko intliziyo phandle ukuba wandibulela umama ukuba lokucebisa yakhe ngomhla apho guy onayo ngakumbi kwezo meko ukwenza ngaphezulu imali kwixesha elizayo. Ngokuqinisekileyo, ingxowa-a imali umatshini enye sounded absolutely ilungelo umama, kakhulu. Ngokwenene ezimbalwa conservative(narrow-minded)Isitshayina abazali ufuna abantwana babo enye umntu nge kakuhle-ihlawulwe umsebenzi, nkqu imoto okanye i-apartment okanye nantoni na ukuba s tangible kwaye obvious. Abanye abazali ngoluhlobo kuyanqaphazekaarely cinga nokuba yayo s worthwhile kwi – elide qhuba. Ngoko ke, chances ngabo, abantwana babo noba get iqinisekise, okanye siye i-arduous idabi ngokuchasene nabazali babo lol(I mhlawumbi belong ukuba yokugqibela uhlobo, kodwa ngethamsanqa usapho lwam aren t ukuba narrow-minded ukuba yenza lula umtshato, ngolohlobo). Kodwa umzekelo wakhe ayikho enye kwi-China. Kukho agalele kakhulu Isitshayina girls jikelele kum bephethe i-ndonwabe ezahlukeneyo kwaye indlela ngakumbi sensible imboniselo. Baya. geqe kwaye uqinisekile ngokwaneleyo hayi rely kwi-indoda kuzisa ulonwabo kwabo, kwaye linalo igunya ngokwaneleyo ukuba iimali kwezabo ubomi(ngexesha roommate mna wathetha malunga kwaba ngathi muddling ngokusebenzisa zonke ihamba kunye akukho injongo ukwenza ngcono ikamva herself ngokwenza real iinzame). Ngabo ukukhangela uhlobo, vula-minded, passionate okanye babenenkalipho uhlobo njalo-njalo.
Kolu luvo, bamele njengathi nezinye ezininzi girls kwezinye iindawo ehlabathini. Ukuba ukhe ubene a foreigner othe an amazing Isitshayina kubekho inkqubela phandle phaya ebomini bakho, kwaye ve sele ukucinga ke ezinye kobu budlelwane(ukuba kukho nayiphi na), nje buza yakhe ntoni yena ufunzele kuba i-namanani umyeni. Engelilo ecela, nani kanjalo get agalele kakhulu ithuba ukwazi okungakumbi malunga yakhe, kwaye ngethemba ukufumana ezinye unye njengoko apho uhlobo, yena ngu ikhangela. Andiqinisekanga ukuba ngaba ukhe ubene sele ngobukho oku. Nangona kunjalo, mna? ufuna ukuthi: musa t i-elokugqibela ukuba othile impendulo(enye ukuze nibe hayi njenge)unako amele zonke ezinye iimpendulo eyenziwe Isitshayina girls. Mna ve rhoqo babekholelwa ukuba wonke umntu kweli hlabathi zizodwa, kwaye bonke onayo a iingcaphephe ezahlukeneyo inguqulelo yintoni i-namanani kubekho inkqubela guy kuba nabo unje. Lowo kufuneka kuba amahlwempu, ngoko ke uyazazi baya aren t marrying kuba imali, kodwa lowo kufuneka kuba okulungileyo elizayo. Lowo kufuneka ibe ubuncinane. Yena ifuna ukuya gym umphinda-phinde ngo ngeveki ngenxa yokuba umfazi wakhe wexesha elizayo iza kuba younger than kuye. Ukuba ukho bald, lowo kufuneka kuba abanye iinwele transplants. Ngabo cheap kwi-China. Yena ifuna ukuba ufuna ukuphila kwi-China. Ukuba indlela abe efumana a kubekho inkqubela abo akubonakali t ufuna esitsha incwadi yokundwendwela. Lowo kufuneka drive a Buick ukubonisa indlela eyodwa nguye.
Ukuba yena akasoze dlala i-instrument, lowo kufuneka bakwazi wavuma kakuhle. Isitshayina abantu absolutely uthando ecula. Lowo kufuneka zingabi na spoiled abantwana ngenxa Isitshayina abafazi hate a guy abo spends a piss imbiza ngokupheleleyo imali ngomhla wakhe abantwana abo musa t appreciate ngayo kwaye musa t xana, kuvela ngasentla, unoxanduva amahlwempu. Lowo kufuneka umsi ezininzi imbiza ngokuba abahlala e-China, nawe futhi ke kufuneka yona settle kwi-entsha inkcubeko
← Abafazi ikhangela Abantu kwi-China, Bahlangana China Abafazi
Incoko cam kwi-intanethi ngaphandle ubhaliso - Ividiyo Ukukhangela Injini e Ukukhangela →